सुस्ताबासीको समस्या बुझन,नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवस सुस्तामा – NagrikPath
सुस्ताबासीको समस्या बुझन,नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवस सुस्तामा
Nagraikpathadmin March 31, 2019	No Comments
परासी,चैत्र १७ ।
पश्चिम नवलपरासीको पत्रकार महासंघले नेपाल पत्रकार महासघंको ६४औं स्थापना दिवस सुस्तामा सम्पन्न गरेको छ । सुस्तावासीको समस्याहरु लाई बुझनको लागि नरायणी नदी पारी सुस्तामा गएर स्थापना दिवस मनाएको छ ।
हिजो नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवस मनानउनको लागि सुगम र शहर भन्दा पनि विकट ठाँउमा बसो बास गर्दै आएका सुस्ता गाँउपालिका वडा नं. ५ सुस्ताबासीहरु को साथमा अन्तरक्रिया गरी मनाएको छ । त्यहाँका स्थानियहरुको समस्यालाई बुझनको लागि ढुङ्गा तरेर सुस्तामा गई स्थापना दिवस मनाएको हो । बाटो नभएको सुस्तामा नरायणी नदिमा ढुङ्गा तरेर कसरी सुस्ताबासी आवतजाजत गर्ने गरेको र त्यहाँको दिनचर्या के छ ? भन्ने कुरा बुझनको लागि नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको पत्रकार महासंघको टोली अन्य पत्रकार र प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सदस्य अजय बहादुर शाही सहितको टोलि सुस्तामा गएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।
नेपाल कै विवादित ठाँउ भन्दै विकास नभएको सुस्ताबासीहरु को अवस्था एकदम दनिय रहेको छ । बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानि लगायत नागरीकता र सिमा विवादमा घेरीएका सुस्ता बासीहरु ले कष्टकर जिवन विताउदै आएका छन् । सुस्तामा जान र आउनको लागि नरायणी नदि पार गर्नु पर्ने अवस्था भईरहँदा कुनै विशेष काम परेर मात्रै ढुङ्गा तरेर सुस्ता बाहिर जाने गरेको सुस्ता बासीहरुको भनाई छ । वर्षातको मौसम नरायणी नदिमा ढुङ्गा यात्रा समेत गर्न नपाए पछि भारतिय नाका भई भारतको बाटो प्रयोग गर्दा भारतिय सुरक्षाकर्मीहरु ले मांशिक र कहिले काही शारीरिक यातना समेत दिदैं आएको सुस्ता लैलाले बताएकि छिन् । यति मात्र नभई आफ्नै भुमिमा सुस्तावासीहरुले पुल बनाउन खोज्दा भारति सुरक्षाकर्मिहरु ले यो भुमि भारतमा रहेको भन्दै अवरोध समेत खड् गर्ने गरेको लैलाको भनाई छ ।
बाटो र नरायणी नदिमा पुल नभएको कारणले गर्दा कतिपय विरामिहरु उपचारको अभावमा मर्ने समेत गरेको लैलाले बताएकी छिन् । यस्तै सुस्तामा रहेको बालबालिकाहरु उच्च शिक्षा बाट पनि वञ्चित भएको अवस्था रहेको छ । सुस्ताका बालबालिका आधारभुत शिक्षा हासिल गर्न सकेपनि उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुँदा उनिहरु बाटोको अभावमा उच्च शिक्षा बाट बञ्चित भएका छन् । उता भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि बाटो भएपनि भारतमा शिक्षा हासिल गर्न सुस्ताको केटाकेटिहरु गएको समयमा भारतिय सुरक्षाकर्मिहरु ले तिमिहरु किन यता आएको आफ्नै नेपालमा गएर पढ भनेर पढ्न अवरुद समेत सृजना गरेका छन् । सुस्तामा खानेपानीको पनि अभाव रहेको छ । सुस्तामा खानेपानी नभएको र बाटा नभएको कारणले जारको पानी समेत किनेर खाने अवस्था नभएको कारणले गर्दा विभिन्न छाला रोगहरु पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तै सुस्ता विजुलिको पहँुच पनि नरहेको आवस्था रहेको छ । सुस्ता गाँउमा बिजुली नगएपछि त्यहाँका स्थानियहरु अध्यारो बस्नु परेको छ । विजुली कै अभावमा बच्चाहरुको पढन पाढन पनि प्रभाव परेको छ । यस्ता विभिन्न समस्याहरु भई रहँदा पनि सरकार र यहाँका नेताहरुको पहल नभएको लैलाले आरोप लगाएकि छिन् । निर्वाचनको समयमा मात्रै आवश्वासन बाड्ने यहाँका नेताहरुले सुस्ताबासीको विकासको लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताएका छिन् ।
यस्तै सुस्ताको भुमि संरक्षण गर्नको लागि सुस्तामा एक सुस्ता बचाउन अभियान समिति पनि रहेको छ । उक्त समितिले सुस्ताको विकासको लागि काठमाडौं स्थित विभिन्न मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गर्नको लागि ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सरकाले नसुनेको अवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासी सुस्ता पश्चिमले आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नं. ५ का प्रदेश संसद अजय बहादुर शाहीले सुस्तामा विकास गर्नको लागि प्रदेश स्तर बाट पहल गर्ने बताएका छन् । सुस्ता विवादित ठाँउ भनेर विकास बाट बञ्चित भएको कारणले गर्दा दुई देश नेपाल भारतले सुस्ताको विवादित सिमालाई समाधान गर्नको लागि पनि प्रदेश मार्फत केन्द्र सम्म पहल गर्ने प्रदेश संसद शाहीले भन्नु भएको छ । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासी सुस्ता पश्चिमका अध्यक्ष हरी शर्माले पत्रकार महासंघ नवलपरासी सुस्ता पश्चिमले सुस्ताको हरेक समस्या लाई उठान गरी केन्द्र सम्म पुर्याउने बताएका छन् । सुस्तामा के कस्ता समस्याहरु रहेको छ त्यसको लागि अगामी दिनहरुमा पनि विभिन्न सरोकारवालाहरु लाई ल्याएर अन्तरक्रिया गराउने र समस्या उठान गर्ने अध्यक्ष शर्माले भन्नु भयो ।
Previous Previous post: नवलपुरमा १० दिन विद्युत सेवा अवरुद्ध
Next Next post: भीषण हावाहुरीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो : अस्पतालमा घाइतेको चाप, रगत अभाव